युगसम्बाद साप्ताहिक - मुलुकलाई सही मार्गमा हिंडाउने आत्मचेत खुले, प्रमुख नेताहरूले राष्ट्रघातको कलंक बोक्न पर्दैन - य
Saturday, 05.30.2020, 05:47pm (GMT+5.5) Home Contact
Monday, 06.11.2012, 04:25pm (GMT+5.5)
यतिबेला मुलुकको गन्तव्यको पत्तो छैन । जेठ १४ अघिसम्म संविधानसभाले संविधान जारी गर्ला भन्ने आमअपेक्षा धुमिल भएपछि राजनीति यसरी भाँडिन पुग्यो कि अब मुलुकको भविष्यमा अन्धकार सिवाय अरु केही देख्न छाडिएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले सुरदेखि नै बाटो बिराउँदै गएका कारण अरुको तातेतातेमा हिंडे र मुलुकलाई भड्खालोमा लगेर जाके । विदेशीको इशारा, निर्देशन, दवाव र उनीहरूको स्वार्थको भारी बोकेर आफ्नो गन्तव्य नै बिर्सेका नेताहरूले अझै पनि सत्मार्ग पहिल्याउन सक्ने भए पनि त्यतातिर पटक्कै उत्सुकता छैन । हिजो बाटो बिराइएकै हो भन्दै सही मार्ग पहिल्याउने प्रयास गर्नुभन्दा मुलुकलाई अरु बढी संकटतिर धकेल्ने मेसो मात्र चलिरहेको छ । आज सबैतिरबाट प्रमुख नेताहरूलाई राष्ट्रघातको कलंकको भारी बोक्ने कि मुलुकलाई निकास दिएर उदाहरणीय बन्ने भन्ने प्रश्न तेर्सिरहेको छ । नेताहरूमा मुलुकलाई सत्मार्गमा हिंडाउने आत्मचोत खुले उनीहरूले राष्ट्रघातको कलंक बोक्न पर्दैन ।
के नेताहरूले कलंक बोक्नु नपर्ने अवस्थाको सिर्जना सम्भव होला ? नहुने केही छैन । विदेशी हस्तक्षेप अस्वीकार गरी हाम्रो समस्या हामी आफैं समाधान गर्छौं मात्र भन्ने हो भने नेपालको समस्या कुनै ठूलो समस्यै हैन । बाहिरी स्वार्थको भरिया बनेका कारण मात्र समस्या एकपछि अर्को थपिंदै गएको हो । यसको एउटै कारण भनेको नेपालका राजनीतिक दलहरू राष्ट्रियताप्रति कत्ति पनि सम्वेदनशील नदेखिनु हो । राष्ट्रियताको विषय शक्ति आर्जको एउटा साधन मात्र बनाउने गरियो । राष्ट्रको अस्मिता बारम्बार लुटिइरहँदा नेताहरू आपसमै बाझाबाझ गरेर कुर्सी र शक्तिको प्यास मेटाउने जमर्कोमात्र गरिरहे । मूल समस्या यही हो । यो समस्या पनि नेपालभित्रबाट उब्जिएको नभै बाहिरी शक्तिले प्रक्षेपित गरेको हो ।
नेपालमा एउटा लोकोक्ति खुब प्रचलित छ– “ल्हासा जान कुतीको बाटो” । यसको अर्थ– गन्तव्य निर्धारण नगरिकन जता मनलाग्यो त्यतै जानु वा गन्तव्यको पहिचान नै नगरी बेसुरमा हिंड्नु हो । आफू कता जाँदैछु भन्ने थाहै नभै अरुले जता डो¥यायो त्यतै जानु घोर अनर्थकारी व्यवहार हो । त्यस्ता व्यक्ति कहिल्यै गन्तव्यमा पुग्दैनन् । गलत बाटो हिंडेपछि समय, शक्ति र सामथ्र्य खेर जान्छ । हिंड्नुपर्ने बाटो र पहिल्याउनुपर्ने गन्तव्यको निर्धारण नगरिकन हिंड्यो भने दुर्घटनाको शिकार हुनु पनि सामान्य नै हो । मुलुकलाई यस्तै कुतीको बाटो हुँदै ल्हासा पु¥याउने ध्याउन्नमा नेताहरू लागेका कारण संविधानसभा संविधान नबनाउँदै मृत्युको मुखमा पुग्यो ।
अहिले संविधानसभा नभएपछि सरकारको राजीनामा र सरकार टिकाउने दुई पक्ष शक्ति प्रदर्शनको होडवाजीमा छ । मुलुक संवैधानिक रिक्तताको यो अवस्थामा आम राजनीतिक सहमति र राजनीतिक निर्णय वेगर एक पाइला अघि बढ्न सक्दैन । सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेको छ तर संविधान संशोधन नगरीकन निर्वाचन असम्भव छ । असारभित्रै संविधान संशोधन नगरे मंसिर ७ गते निर्वाचन असम्भव छ । यस्तोमा राजनीतिक सहमतिको विकल्प छैन । संविधान संशोधनका लागि संसद् आवश्यक पर्छ तर संसद नभएको अवस्थामा राजनीतिक निर्णय नै एकमात्र विकल्प हो र त्यसका लागि दलहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ । अहिलेको समस्या यही हो । विदेशी शक्तिको प्रचुर प्रभाव यतिबेला पनि देखापरेको छ । सहमतीय सरकारको नाममा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार टिकाउन भारतको मध्यस्थतामा भएको ५ बुँदे सहमतिले संविधानसभा विघटन हुँदै माओवादी–मधेशवादी सरकारको दीर्घायूको आकांक्षा समेत लगभग पूरा भएको छ । यो सब राष्ट्रविरोधी कदम हो ।
विपक्षी दलहरूले भारतको षड्यन्त्र पछि मात्र बुझे । भट्टराई सरकार बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेका बेला ५ बुँदे सहमति भयो । त्यसले सरकारलाई टिकायो, संविधानसभा टिकाउन सकेन, संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सकेन । यसैको परिणाम अहिले मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरू सत्ता पक्ष र विपक्षका रुपमा मोर्चाबन्दी गरेर एक अर्काबिरुद्ध विषवमन गरिरहेका छन् । दुवै पक्ष आफूसंग अझै पनि जनमत रहेको अहंकार प्रदर्शन गरिरहेका छन् । दुवै पक्ष क्रान्तिको नेतृत्व गरेको दम्भ पालिरहेका छन् । अहंकार र अभिमानले मानिसको कहिल्यै भलो हुँदैन । अहंकार गर्नेको पतन चाँडै हुन्छ । त्यसकारण कसैले पनि अहंकार गर्नु हुँदैन । जव दशा लाग्छ तव मानिसमा अहंकार र अभिमान पलाउँछ । ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धि’ भनेर त्यसै भनिएको होइन । हानी–नोक्सानी हुने बेलामा बुद्धि पनि त्यस्तै हुन्छ । दिमाग विकृत भएर उल्टो उल्टो मात्र सोच्न र गर्न मन पराउँछ ! यस्तै तर्कहरू बूढापाकाले गर्दछन् । अहिले यस्तै व्यवहार देखिंदो छ । केही नेताको स्वार्थ, सनक र लहडको शिकार सिंगो मुलुक भएको छ ।
त्यसैले माओवादीको जनयुद्धदेखि जनआन्दोलन–२ को उपलब्धि नै यति बेला अस्तित्वविहीन हुन पुगेको छ । जनयुद्ध गर्ने माओवादी र दोस्रो जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेसले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । संविधानसभाले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधान जारी गर्न नसकेपछि संविधानसभाले गरेको घोषणाको वैधानिकतामा समेत प्रश्न उठाउन थालिएको छ । व्यवस्थापिका संसद्को निर्णय कानुनसम्मत हुन्छ तर संविधानसभाले जे काम गर्नुपर्ने हो त्यो नगरी विघटन भएपछि त्यसले गरेका घोषणाहरूमाथि प्रश्न उठ्न सामान्य नै मान्न सकिन्छ । सामयिक राजनीतिक धारभन्दा अलग विचार प्रवाह गर्नेहरूका लागि यस्ता प्रश्न उठाउन सजिलो पनि भएको छ ।
त्यसैले सहमति गर्ने चाहना छ भने आ–आफ्ना आग्रहरूलाई पन्छाएर एउटै बुँदामा बहस गर्नुपर्छ । नयाँ नेपाल बनाउने रटान सवैले गरेका छन् भने दलहरूबीच असहमति र आरोप–प्रत्यारोप किन ? गल्ती कोबाट भएको छ भन्ने कुरा आपसी वार्ताबाटै टुङ्गो लाग्छ । गल्ती गरेकाहरू सच्चिनुपर्छ र अरुका राम्रा सुझावहरूको पालना पनि गर्नुपर्छ । तर यहाँ अहंकारले बास गरेको छ । त्यो अहंकारले आफू स्वयंको त विनाश हुन्छ नै संगसंगै सिंगो राष्ट्रलाई नै कुन भड्खालोमा जाक्ने हो भन्ने चिन्ता व्यापक रुपमा उठिरहेको छ । अहिले हामी जुन बाटोमा हिंडिरहेका छौं त्यो ल्हासा जाने कुतीकै बाटो हो । हरेक घटनाक्रमहरूमा विदेशी हस्तक्षेप चरम रुपमा हुने गरेको छ । विदेशी हस्तक्षेप पनि आफू अनुकुल भए सहयोग र प्रतिकूल भए हस्तक्षेप हुने गरेको छ । राष्ट्रियताका सवालमा जतिसुकै चर्का कुरा गरे पनि सवै दलहरूको कमजोरी पक्ष भनेकै विदेशी हस्तक्षेपलाई निम्तो दिइरहनु हो ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा बेमेलको स्थिति उत्पन्न हुनुको प्रमुख कारण भनेको विदेशी शक्तिको भूमिका नै हो । एउटा निश्चित उद्देश्यका लागि विपरीत राजनीतिक दलहरूबीच मिलन गराएर आन्दोलन सफल भएपछि जुनरुपमा निषेध र बेमेलको स्थितिको सुरुवात गराइयो यसैले अभूतपूर्व राजनीतिक परिवर्तन भएको आधा दशकभन्दा बढी भैसक्दा पनि मुलुकमा सुधारको कुनै संकेत देखिएन, बरु राष्ट्रिय अखण्डता नै खतरामा परेको अनुभूति बढ्दो छ । दिल्लीमा भएको बाह्र बुँदे सम्झौताले जसलाई जहाँ पु¥याउनुपर्ने थियो त्यहाँ सबै पुगिसकेका हुँदा अब मुलुकलाई दलदलको खाडलमा हाल्ने अभियान मात्र चलिरहेको छ ।
शान्ति र परिवर्तनको नाममा हिंसा जन्माउने प्रपञ्च विशवव्यापी रुपमा चलिरहेको छ । शान्तिको नाममा आफ्नो स्वार्थपूर्तिको खेल चल्दा नेपालमा मात्र होइन विश्व नै अशान्त भैरहेको छ । हतियार प्रदर्शनले कहिल्यै पनि शान्ति कायम हुँदैन । तर अहिले शान्तिको नाममा हतियारको व्यापार मौलाउँदो छ । अहिले मानवअधिकारको आकर्षक पोकाभित्र गुम्स्याइएको मानवअधिकार विरोधी क्रियाकपाले मानवकै जीवन कष्टमय बन्दै गैरहेको छ । एउटाको मानवअधिकार स्थापित गर्ने नाममा अर्कोको टाउकोको मोल तोक्ने काम हुन थालेका छन् । युद्धलाई मुक्तिको आधार बनाएर त्यसैबाट आमूल परिवर्तन गर्न खोज्नेहरूको चाहना गलत हो भन्ने कुरा धेरैपटक प्रमाणित भैसकेको छ । हतियारले मात्रै सत्ता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विगतको धारणा गलत सावित भैसके पनि विश्वमा हतियारको उत्पादन र व्यापार घटेको छैन । विश्वलाई शान्ति, समुन्नति, मानवअधिकार प्रदान गर्ने संस्थाको रुपमा चिनिएको संयुक्त राष्ट्रसंघ विकसित भनिने देशहरूले गरीब देशहरूमा गरेको हतियारको व्यापारबाट आर्जन गरेको रकमबाट चलिरहेको छ । ठूला देशहरूले हतियार व्यापार गर्न नपाउने हो भने राष्ट्रसंघ पनि चल्न सक्दैन । हतियारको उत्पादन र व्यापार पनि गर्ने र शान्तिको पूजा पनि गर्ने दोहोरो चरित्र अहिले प्रदर्शित भैरहेका छन् ।
विश्वलाई शान्त बनाउने एकमात्र उपाय भनेको समानता र हतियारको उत्पादन तथा व्यापार बन्द गर्नु हो । हतियारको उत्पादन हुन्जेलसम्म शान्ति सम्भव छैन । आफ्नो प्रभाव जमाउन र आर्थिक लाभ लिनकै लागि विद्रोह जन्माउने गरिएको पाइन्छ । अफ्रिका होस् या एसिया जति पनि देशमा युद्ध भड्केका छन् त्यसको मूल कारण हतियार उत्पादक ठूला राष्ट्रहरू नै हुन् । आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि उनीहरू नै हतियार ‘सप्लाई’ गर्ने र शान्ति स्थापनाका लागि भन्दै पुनः हतियारकै व्यापार गर्ने काम भैरहेको छ । विश्व शान्तिका लागि योभन्दा दुर्भाग्य अरु केही होइन ।